Mividiana LEAGOO KIICAA MIX latsaky ny 60 euro miaraka amin'ny fihenam-bidy 50%! | Androidsis
Ny finday tsy misy bontolo dia fahatezerana avokoa. Xiaomi dia nanokatra ny fandrarana tamin'ny Mi MIX ary mihamaro ny mpamokatra manatevin-daharana raha ny amin'ny fampisehoana terminal any amin'ny famantaran-tanana tsy hita maso. Ary manana ohatra vaovao isika ao amin'ny LEAGOO KIICAA MIX, fakan-tsary finday iray izay mazava tsara fa avy amin'ny vahaolana Xiaomi ary izay tsy ampoizina amin'ny vidiny mora vaky.
Ary ilay mpanamboatra dia nanolotra tolotra tsy azo ivalozana: afaka mividy a ianao LEAGOO KIICAA MIX amin'ny 57.83 euro ihany hanova ny fividianana ny terminal amin'ny alàlan'ity rohy ity ao amin'ny Gearbest, hatramin'ny 3 septambra ihany io.
LEAGOO KIICAA MIX, finday avo lenta tsy misy sary eo alohany dia mora kokoa noho ny hatramin'izay
Mazava ho azy fa iray amin'ireo zava-nisongadina tamin'ity telefaona ity ny endriny manintona. Ary izany ve ilay LEAGOO KIICAA MIX dia hitodika amin'ny lohany sy ny lohany. Ho fanampin'izay, toy ny mahazatra ao amin'ny mpanamboatra Aziatika, ny fitaovana izay mametraka ny telefaona LEAGOO vaovao dia manana endri-javatra mihoatra ny ampy hampihetsika ny lalao na ny fampiharana tsy misy olana.
Hanombohana azy, ny efijery azy dia vita amin'ny takelaka IPS 5.5 santimetatra izay mahatratra ny vahaolana Full HD. Eo ambanin'ny sarin'ny LEAGOO KIICAA MIX dia mahita iray amin'ireo vahaolana fantatry ny MediaTek izahay. Miresaka momba ny processeur aho Sary MTK6750T valo hafainganam-pandeha 1.5 GHz famantaranandro miaraka amin'ny RAM 3 GB ary tahiry anatiny 32 GB izay azo hitarina hatramin'ny 256GB amin'ny alàlan'ny slot karatra micro SD.
Asongadino ny bateria 3.000 Mah miaraka amin'ny rafitra famahana haingana, mihoatra ny ampy hanohanana ny lanjan'ny finday rehetra. Ao amin'ny faritra fakantsary, ny LEAGOO KIICA MIX dia tsy ampoizina miaraka amin'ny rafitry ny fakantsary roa misy fakan-tsary 13-megapixel sy solomaso 2-megapixel faharoa, mety amin'ny effets blur na bokeh. Ary ny azy Fakan-tsary mialoha 13 megapixel dia hahafaly ireo tia tena.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Vidio LEAGOO KIICAA MIX latsaky ny 60 euro miaraka amin'ny fihenam-bidy 50%!
Jordi More dia hoy izy:
Mandrosoa, inona indray ny masontsivana mikorontana, ary ny € 60 fotsiny? Aiza ny jono? Inona ny dikan-Android ampiasainy?
Valio i Jordi Mas
Makà smartphone Gretel amin'ny $ 39,99 fotsiny